IHG, Hilton naMarriott vanovimba neBenchmark Pyramid kune makumi matatu nemana maHotera muUS Spain, UK.
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » IHG, Hilton naMarriott vanovimba neBenchmark Pyramid kune makumi matatu nemana maHotera muUS Spain, UK.
Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! • Hospitality Industry
Benchmark Pyramid yakawedzera mahotera makumi matatu nemana kune manejimendi ayo mumwedzi ichangopfuura, sezvo kambani iri kuona kuwedzera kwekuda munzvimbo dzese dzebhizinesi rayo mune zvese zvekutora uye zvibvumirano zvemanejimendi zvitsva.
Zvivakwa zvitsva muUS zvinosanganisira ese ari maviri anosarudza- uye akazara-sevhisi mhando naMarriott, Hilton uye IHG, uye anotangira munzvimbo kubva kuMichigan kuenda kuTexas. MuEurope, kuwedzera kune portfolio kwaisanganisira zvivakwa zvitatu zveChirungu: Staverton Estate muDaventry, Yotel muManchester, uye London EDITION muguta guru.
Benchmark Pyramid yatorawo mabasa matsva muSpain's Mallorca, Ibiza, neBarcelona kune mamwe gumi nemaviri mahotera. Nhau dzanhasi dzinounza Benchmark Pyramid's pasi rese portfolio kune zvinopfuura mazana maviri nemakumi matatu zvivakwa muUS, Caribbean, neEurope.
Benchmark Pyramid zvakare inoenderera mberi nekukura kwayo yekugamuchira chikuva nemasangano akakosha masevhisi uye vanokweretesa, uye kusarudzirwa migove mitsva yekugamuchira kune ese akazara- uye akasarudzwa-sevhisi zvivakwa muTexas, New York, Pennsylvania, Michigan neFlorida.
Nezve Benchmark Piramidhi
Benchmark Pyramid yakaumbwa nekubatanidzwa muna 2021 kwemakambani maviri ehotera nehotera, achigadzira iyo inonyanya kutarisana nevaridzi, kambani ine ruzivo muindasitiri nenzvimbo yayo yepamusoro yebasa. Nzvimbo yepasirese yesangano iyi inodarika zvivakwa zvinodarika mazana maviri nemakumi matatu muUS, Caribbean neEurope. Inochengetedza mahofisi muBoston; The Woodlands, Texas; Cincinnati; uye London. Kuti uwane rumwe ruzivo, shanya www.benchmarkpyramid.com.